Jowhar.com - Somali news Leader - News: Axmed Diiriye oo ugu baaqay Xasan Dahir inuu aqbalo wixii Maslaxad ugu jirto sii deyntiisa
December 04 2013 23:17:21
Axmed Diiriye oo ugu baaqay Xasan Dahir inuu aqbalo wixii Maslaxad ugu jirto sii deyntiisa
Nabadoon Axmed Diiriye Cali oo ka mid ah Odayaasha dhaqanka Muqdisho ayaa ugu baaqay Sheekh Xasan Dahir Aweys inuu aqbalo shuruudaha la hor dhigay ee ku aadan sii deyntiisa, isagoo ka dalbaday dowladda inay u fududeyso.
"Xasan Dahir ururkiisa haduu maanta xisbi wada hadal iyo dib u heshiisiin u diyaar ah yahay, ha fududeeyo si alaala sida uga qeyb geli lahaa, wax alaala wixii ku haboon oo u u abaaran inuu xisbigiisa ku biiro madax banaanidiisa ku helo, wixii shuruud uga aadan ha aqbalo isagana ha fududeeyo"ayuu yiri Nabadoon Axmed Diiriye.
Axmed Diiriye ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan hadalka ka soo yeeray Xisbul Islaam ee ku aadan inay noqdeen xisbi wada hadal iyo dib u heshiisiin doonaya inuu wax ku raadiyo, bedelkii qori la adeegsan lahaa.
"Waa ra'yi fiican in cidii wax dooneysa inay xabad iyo dagaal midka ku raadininee, ee wada hadal iyo dib u heshiisiin wax ku raadiso, Xisbul Islaam waa soo dhoweyneynaa inay dib u heshiisiin iyo maslaxad umadeed wax ku doonto"ayuu yiri Axmed Diiriye.
Nabadoon Axmed Diiriye ayaa ka codsaday dowladda inay soo dhoweyso Xisbul Islaam, mar hadii ay qaateen qalinka oo ay qoriga dhigeen, siyaasad ay doonayaan inay wax ku raadsadaan sida uu yiri.
"Waxaa leenahay dowladda ha soo dhoweyso, wax alaala wixii maslaxad dadku ugu jiro wuu garanayaan, wixii toosan waa la yaqaanaa iyo waxaan toosneyn, waxaa leeyahay Xasan Dahir ha aqbal wax alaala wixii maslaxad ugu jira, fahamkana uu qaato, dowladdana ha u fududeyso in xisbigiisa ka mid noqdo"ayuu yiri Axmed Diiriye.
Xoghayihii arrimaha dibada Xisbul Islaam Sheekh Maxamed Macalin ayaa shalay ka sheegay magaalada Muqdisho inuu shir nabadeed u furmay, isagoo dowladda ka codsaday in la sii daayo wadaadka.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Sheekh Xasan Dahir loo wareejinayo Xabsiga Dhexe, si Maxkamad milateri loo saaro, kadib markii shuruudo la hor dhigay oo ku aadanaa sii deyntiisa uu diiday inuu aqbalo.
Xasan Dahir ayaa bishii June ee sanadkan ka soo baxsaday degmada Baraawe, kadib markii iska hor imaad ka dhacay lagu dilay Saraakiil ka tirsan Shabaab oo ay isku fikrad ka ahaayeen khilaafka kala dhaxeeyay iyaga iyo Hogaamiyaha Al-Shabaab, iyadoo dhamaadkii bishaas uu gacanta dowladda soo galay, markii Odayaal ku heyb ah ay ka keeneen degmada Cadaado.
master on September 17 2013
0 Comments · 4096 Reads
jowhar.com3,072,865 unique visits